Bit By Bit - dhaqanka loo kuurgalo - 2.3.2.4 hor timi
Miyigii Population, miyigii isticmaalka, iyo nidaamka, miyigii oo aad u adag si ay u isticmaalaan ilaha xogta weyn inaad wax ka barato isbeddellada muddada-dheer.
Mid ka mid ah faa'iidooyinka badan oo ilo badan oo xogta weyn yihiin in ay soo ururiyaan xogta muddo. saynisyahano Social wac noocan oo kale ah in ka badan-time xogta, xogta gaadhya. Oo, si dabiici ah, xogta gaadhya yihiin kuwo aad u muhiim u ah barashada isbedel. Si kalsooni leh cabbiro isbedel, si kastaba ha ahaatee, habka cabbiraadda laftiisa waa in ay ahaadaan kuwo deggan. In erayadii sociologist Otis Dudley Duncan, "haddii aad rabto in aad ku qiyaastaan ​​ayaa isbedel, ma beddeli qiyaastii" (Fischer 2011) .
Nasiib darro, nidaamyada-gaar ahaan dad badan oo data weyn nidaamka ganacsi oo loo abuuro oo ay qabsadaan raad-yihiin digital waqtiga oo dhan la beddelo, nidaamka ah in aan soo wici doonaa miyigii. Gaar ahaan, nidaamyadan beddelo saddex siyaabood oo waaweyn: miyigii dadweynaha (isbedelka oo la isticmaalo), miyigii dabeecadda (isbedelka sida ay dadku u isticmaalayaan iyaga), iyo nidaamka miyigii (isbedelka nidaamka laftiisa). Saddexda ilaha miyigii ka dhigan tahay in hannaankii wax in xogta raad digital keeni kara isbedel muhiim ah in dunida, ama waxaa keeni kara nooc ka mid ah miyigii.
Isha koowaad ee miyigii-dadka miyigii-kan waxaa la isticmaalayo nidaamka, iyo this badala kafado dul saaran muddo dheer iyo qolfo leh waqti-gaaban. Tusaale ahaan, ka 2008 si ay u soo bandhigaan celceliska da'da dadka on warbaahinta bulshada ayaa kor u kacay. Waxa intaa dheer in kuwan isbeddellada muddada-dheer, dadka isticmaalaya nidaam la joogo wax kasta oo kala duwan. Tusaale ahaan, inta lagu guda jiro doorashada US Madaxtooyada ee 2012 saamiga Twitter ku saabsan siyaasadda in ay qoreen dumarka maalin ka maalin fadhin (Diaz et al. 2016) . Sidaas darteed, waxa laga yaabaa in ay ka muuqan noqon isbeddel niyadda ah ee Twitter aayadda dhab kaliya waxaa laga yaabaa in isbeddel ah ee oo la hadlaya daqiiqad kasta.
Waxa intaa dheer in isbeddel ah ee oo la isticmaalayo nidaamka ah, waxaa jira sidoo kale bedeshaa sida nidaamka loo isticmaalo. Tusaale ahaan, intii lagu guda jiray dibad baayacmushtara Gezi Park ee Istanbul, Turkey ee 2013 dibad bedelay ay isticmaalka hashtags in cabashadaasi ay fartaan. Halkan sida Zeynep Tufekci (2014) ku tilmaamay miyigii ah, oo waxay awooday in la ogaado, maxaa yeelay, iyada waxaa logu dhaqanka on Twitter oo dhulkuu ku:
"Maxaa dhacay oo ahaa in sida ugu dhakhsaha badan dibad noqday sheekada xukuma, tiro badan oo dad. . . joojiyeen isticmaalka hashtags ahayn inaan ka dhaansado si ay ifafaale cusub dareenka. . .. Inkasta oo dibad-sii, iyo xataa xoojiyey, hashtags ku dhintay hoos. Wareysi shaaca ka qaaday laba sababood for this. First, mar qof walba wuu ogaa mowduuca, hashtag ahaa mar dhiibida oo aan waxtar lahayn oo ku saabsan madal Twitter ah qof-ku koobnayn. Second, hashtags lagu arkay oo keliya sida waxtar u soo jiitay dareenka in mawduuc gaar ah, oo aan lagu bixin hadalka ku saabsan. "
Sidaas darteed, cilmi kuwaas oo waxbarasho dibad ah by falanqeeyo tweets la hashtags dibad-xiriira leeyihiin lahaa dareen gurracan ee waxa dhacayey sababta oo ah miyigii this dabeecadda. Tusaale ahaan, waxay rumaysataan inuu wada hadal ah ee dibad-dheer hoos ka hor inta dhab ahaantii hoos u dhacay.
Nooca saddexaad ee miyigii waa nidaam miyigii. Xaaladdan oo kale, ma aha dadka beddelo ama labiska dhaqanka ay, laakiin nidaamka laftiisa beddelo. Tusaale ahaan, muddo Facebook ayaa kor xadka on dhererka updates status. Sidaas darteed, wax baadhitaan gaadhya of updates xaaladda noqon doonaa nugul artifacts keena isbedelka this. miyigii System ula xiriira dhibaatada loo yaqaan Wareeriyay algorithmic taas oo aan hadda u noqon.